Dawladii Prof Cali M Geedi oo la riday, ma rasuulka ha ku reed ku daa?
Dawladii Prof Cali M Geedi, oo ka koobneeyd 71 Gole Wasiiro, oo la soo hor-dhigay Baarlamaanka Ku Meel Gaarka ee Federalaaka Soomaaliyeed ee jooga, Nairoobi caasimadda Kenya, oo ah magaaladda lagu soo dhisay baarlamaankaas Soomaaliyeed.
Taariikhda markeey aheeyd 11 Dec 2004, oo la riday ama la aqbali waayey, in eey dawladu noqoto sida uu u soo xushay Prof Cali M Geedi.
Ra`iisal Wasaaraha Prof Cali M Geedi inkastoo uu, asagu, sida uu ka sheegay laanta afsoomaaliga ee BBC-da, in uu wada tashi marka uu la sameeyey qeybaha kala duwan ee siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee Xil-dhibaano iyo cuqaal-iskugu jiro ee Kenya jooga , ee Soomaalida ah, la tashaday, marka uu sameeynaayaayey dawladaan uu dhisay, ee 71 wasiiro ka kooban.
Soomaaliya, waxeey soo martey dawlado ku dhisnaa -baarlamaani ansixintiisa- oo ku saleeysnaa in shacabka-Soomaaliyeed oo qabiil-qarameed huwanaa, laakiinse qurxoonaa, oo aan dil iyo feer iyo faralaab ka dhici jirin. Sannadahaasna waxeey aheeyd marka laga soo bilaabo - 1960 ilaa sannadka markuu ku ekaa - 1969. Waloo doorashooyinkii dhici jiray sannadahaas tiro aad iyo aad u yar ku dhinteen oo dhimashado eeyna ka marneeyn, doorashooyinka intii lagu jiray.
Waxaa na soo maray dawlad loogu magac daray dawladii Cabdirashiid ee Majeerteen- 1961-1964, iyo dawladii Cabdirizaaq ee Majeerteen ayana, sannadihii u dhaxeeyey 1964-1967 iyo midii ugu danbeeysay ee aheeyd dawladii Cigaal ee Isaaq 1967-1969 ilaa Octobar sannadkaas 1969 oo eey, askartii ama Ciidamadii Qalabaka siday( Sercito Somalo), ee dalka kala wareegeen.
Dawladii Prof Cali M Geedi, uu soo dhisay waa lagu diiday maanta oo ah, taariikhda 11 dec 2004, oo xil-dhibaanadii baarlamanka federaalka soomaaliya, eey cod u qaadeen.
Dawladaan prof Cali M Geedi, ayana waxaan u bixineynaa, dawladii Abgaal ee Geedi oo la diiday, inkastoo lagu celinaayo sida aan wararka ku haaysano, waloo tii Rizaaq ee Majeerteen 1964-1967, madax-weyne Aden Cadde oo Hawiye ahaa uu ku ciliyey waqtigaas, kadibna la doortay inkastoo uu prime minister Cabdirizaaq Xaaji Xuseen, isticmaalay xeeelad cajiib aheeyd oo uu xil-dhibaanadii waqtigaas jiray ku dhagray, sida taariikhda nalagu sheegay; haddan midaan uu - ra`iisal wasaaraha u yahay Prof Geedi oo Abgaal ah, u isticmaalo xeelad uu ku marsiisto, ansixinta dawladiisa uu rabo in uu soo dhisto, bilaha soo socdo, waaba hadii marka kale, lagu celiyo- in uu ra`iisal wasaare ka noqdo dalka federalka soomaaliyeed, waloo eey u egtahay in lagu celinaayo xil-kiisa.
Xil-dhibaanada Baarlamaank Federaalka Soomaaliyeed, ee Kenya degan wali, ogaada arinta ma ahan mid shacabka Soomaaliyeed ka turjumeeysa, hana isku amaanina dawladaan diidideeyda , in aad u maleeysaan in aad shacabka wax u qabateen, ee marka horeba meeshaa waxaad ku joogtaan, arin shacabka Soomaaliyeed uu u arko in aad noogu gogol xaartaan, doorasho guud ee ka dhacda deegaanadda Soomaaliyeed, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya ee ma tihiin, kuwo Shacabka toos idin soo doortay; sidaas darteed Xil-dhibaanoow waxaad tahay ku meel gaar ee la soco, shan sanno ka dibna shacabka koonfur degan ee Soomaaliyeed waa in loo diyaariyaa, doorasho ku dhisan- one vote one man - waxa lagu magacaabo.
Dawaldii Abgaal ee Geedi waa dhacday, marka hore , madaxweyne Cabdulaahi Yuusufoow, ku celi mar kale- Prime minister Geedi in la soo dhiso, asagoo xoogaa ka badalay dawladaan ka kooban 71-da , wasiir iyo wasiir ku xigeen, ee qabiilada Soomaaliyeed ka boodeen, ayagoo ku soo gabaday magaca ah, xil-dhibaano Soomaaliyeed oo sharci, ilaalinaayo baan nahay.
Xil-dhibaanoow, runta ma kuu sheegnaa, weey fiicantahay in aad xeerka Axdiga la qortey aad raacdid oo ilaalisid, laakiin rididda dawladaan prof Cali M Geedi, uma arkaan Soomali badan in eey qalbi fiicnaan idinka aheeyd, ee u jeedooyino kale , baad u danlaheeydeen; xumaannna ma ahan oo idinka oo dhan baaba ku dhisnaa xildhibaano- waxna qorin, waxna akhrin in yar ma ahee-iskaba dhaaf in aa akhriseen ama akhrin kartaan kuligiin, waxa ku qoran -Axdiga Federaalka ee la qortey- laakiin, aad u badan tihiin kuwo dalka iyo dadka Soomaaliyeed, xoog dalka iyo dadka ku heeysta , sidaas darteed aan idinka rabno in aad ahaataan kuwo ku meel gaar ah, inta aan, soomaalideedanna qofka aan rabno soo xulaneeyno, oo nooga hirgaleeyso - one man one vote- waxa loogu yeero ama lagu magacaabo.
Feero Gaar ah- Waxaa xusid mudan in la sheego, taariikho -siyaasadeed oo waa horey dhacay, waxaa la sheegaa in qabiilka Abgaal eey banaan bax ka sameeyeen, oo sida aan u arkana ah, wax qofka ama qabiiladda dimoqoraadiga ku dhisan eey xaq u leeyihiin in eey sameeyaan- bacdamaa aan qofna ku dhimaneeyn; qofna sharftiisa gaar ahaaneeyd meel looga dhaceeyn- banaan baxaas waxeey qabiilka soomaaliyeed ee Abgaal ku shirbeen, fagaaraha Villa Somalo- ayagoo ku dhawaaqayo- marna ma Rashiidaa; marna ma Rizaaqaa; Rasuulka ha ku reed kudee, inta kale ma Rootiyaa.
MAQAAL: Qabiil iyo Qaran meel ma wada gali karaan? [Gagaale]